Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Fiainana vaovao ho an'ny Bluefields Westmoreland Jamaika
Hostpost • Vaovao Mafana Jamaika
Manomboka ny fiandohan'ny Novambra 2021, ny hetsika nataon'ny Bluefields Best Kept Street Competition, izay novolavolain'i Keith R. Wedderburn ao amin'ny Bluefields Organic Farm, dia hankalaza sy hanaiky ny asa mafy sy ny fahaiza-mamorona nataon'ny mponina maro mba hahatonga ny manodidina azy ho toerana tsara tarehy. velona.
Ny loka dia natao hamporisihana ny hambom-pon'ny olom-pirenena ao amin'ny faritra misy azy, hamporisika ireo fanao mitsinjo ny tontolo iainana, fampitomboana ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana, ary fanomezana valisoa ho an'ireo izay mikarakara ny arabeny.
Hiditra amin'ny arabe iray ny mponina, ary ny mpitsara dia asaina mitady ny lalana mety indrindra amin'ny:
1. Loka mahasarika indrindra amin'ny maso 2. Loka tsara indrindra amin'ny zaridaina eo anoloana 3. Loka tsara indrindra amin'ny fanazaran-tena fanodinana 4. Loka tsara indrindra miady amin'ny fako an-dalambe ary 5. Tanora ao amin'ny Loka Best Kept Street.
Ny tanànan'i Bluefields dia niorina tamin'ny 1519. Annotto Bay sy Sevilla La Nueva na New Seville dia tanàna roa nialoha ny Bluefields. Henry Morgan the Buccaneer, Captain Blight (nitondra mofo sy ackee ho an'ny nosy), ary Henry Gosse, mpanoratra malaza momba ny vorona Indiana Andrefana, dia samy nijanona tao Bluefields avokoa. Nisy ihany koa ireo toeram-pambolena maromaro manodidina izay mbola misy sisa tavela amin’ny fambolen-kazo Bluefields sy Shafton ankehitriny. Hatreto dia tena liana amin'ny tetikasa naroso ireo mpikambana avy amin'ny fokonolona. Natsangana ny Komity Mpitantana hitantana ny tetikasa notarihin'i Keith Wedderburn ary efa nahazo fanohanana ara-bola sy fanoloran-tena avy amin'ny fianakavian'ny Bluefields monina any ampitan-dranomasina izy ireo.
Raha vao manomboka ny fifaninanana dia miandry fiovana tanteraka izy ireo. Ankoatra ny fanadiovana sy ny fahatsaran-tarehy ary ny fikojakojana ny toerana dia maro ny vokatra andrasana. Ny fako, ohatra, dia hitantana amin’ny fomba maha-tompon’andraikitra, tsy tokony hisy intsony ny fandoroana fako na ny fanariana tsy ara-dalàna. Entanina ny mpandray anjara handray anjara amin’ny atrikasa mifandraika amin’ny fitantanana ny fako sy ny fako izay hahatonga azy ireo hianatra ny fomba hanasarahana ny fako ary hanomboka hampiasa akora organika hanaovana zezika. Tsy havela koa ny fako voaangona. Mba hanamafisana kokoa ny fitantanana ny fako dia takiana ny tompon’andraikitra isan-tokony hanangona ireo fako toy ny plastika, tavoahangy vera, rakitra aliminioma, sns, isaky ny arabe. 2 Ny valinteny sasany hatreto dia ny: “Hevitra tsara izay tohananay ho iray amin'ireo tetikasa Countrystyle Villages as Businesses ary hanome fanohanana sy fampahalalana ho anao koa” – Diana McIntyre Pike, Consultant Developer Tourism Community ny olona ao amin'ny fiaraha-monina dia manana fahatsapana ny FAHAGAGANA amin'ny toerana misy azy, miaraka amin'ny fandrisihana hanaraka izany. Omeko anao ny fanoloran-tenako, hanohana anao aho. – Ralva Ellison, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Belmont, izay monina any ivelany ankehitriny. “Tena tsara ary fandraisana andraikitra tena tsara.” Hoy ny sergent Berry ao amin'ny tobin'ny polisy Bluefields.
“Hevitra hendry. Izaho dia mandray anjara amin'ny fotoana rehetra ilaina", hoy i Robblin Wedderburn, mponina taloha tao Belmont ary lefitry ny lefitry ny polisy efa misotro ronono izay mipetraka any Etazonia amin'izao fotoana izao. Amboary manodidina ny tanora izany mba haharitra maharitra. ” Hoy i Wolde Kristos, mpamorona vondrom-piarahamonina ary mponina ao Belmont "Hevitra tsara. Mino aho fa hitondra soa ho an’ny fiaraha-monina ny zavatra tahaka izao.” – Nickeisha Robinson, mponina ao Belmont “Tena tsara… Raha azo atao dia alefaso any amin’ny adiresiko mailaka ny soso-kevitra. Tena hahazo fividianana avy amin'ny Westmoreland Municipal Corporation aho ”-
Michael Jackson "Faly aho miara-miasa aminao. Manolotra alina maimaim-poana izahay hahazoana loka. ” – Linda Cheddister (Luna Seas Hotel) “Toy ny tetikasa tsara. Ho faly aho ho mpitsara amin'ity tetikasa ity. Mba omeo fanampim-panazavana bebe kokoa aho” – Barrington Taylor (Tetikasan-dranon-drano NEPA) “Misaotra anao nanatona. Aza misalasala mandefa mailaka amiko ny fampahalalana etsy ambony sy ny antsipiriany hafa ”- Rochelle Forbes (Sandal South Coast PR Manager). Araka ny filazan'ny filohan'ny komity mpitantana ny fifaninanana eo amin'ny vondrom-piarahamonina Bluefields, "Tsy ho tanteraka izany raha tsy misy ekipa mpilatsaka an-tsitrapo miasa ao ambadiky ny sehatra. Anisan'izany i Atoa André James, Rtoa Alrica Whyte-Smith, Rtoa Tracey Edwards, Rtoa Diana McIntyre-Pike, Rtoa Tracey Spence, Atoa Charles O. Wilkinson na Sir W One, Rtoa Alison Massa, Rtoa Adrianna Parchment ary Rtoa Kelon Wedderburn. Misaotra an'ireo mpanohana anay, namana ary fianakavian'ny vondrom-piarahamonina izahay. Tianay koa ny hanararaotra izany fahafahana izany mba hampirisihana ny hafa avy amin’io faritra io, izay mety ho lavitra, mba ho tonga ao anaty sambo.
Tonga izao ny fotoana hifandraisan-tanana sy hanampy hanatsara ny lalanao manokana! Ity no toerana Jamaikana tsara tarehy anananao, amin'ny fiverenanao. Ny fanomezana rehetra dia hampiasaina amin'ny loka ary hanampiana ireo mpandray anjara amin'ny fanomanana, raha azo atao. Ity tetikasa ity dia hanentana ny mpandray anjara amin'ny hetsika tsara hafa, ary azo raisina mora foana any amin'ny faritra hafa ao Jamaika ary ho lasa mpanentana amin'ny fanovana eo amin'ny fiarahamonina.